Zaza 11 Taona Mpanjakan’ny Aterineto Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2016 12:39 GMT
Tsy manao eson-teny aminy intsony ireo mpiara-mianatra amin'i Stepan Saveliev. Sary navoakan'i Kevin Rothrock
Tamin'ny volana lasa teo, reny iray monina ao Maosko no nahatsiaro naharary momba ny zanany lahy kely 11 taona. Tsaroany tena naharary ka nitodihany tamin'ny Facebook, izay nanaovany antso avo tamin'ireo namany niaraka tamin'ny fangatahana kely. Sahala amin'ny toa voaesoeso ny zanany lahy noho ny fitazonany pejy ao amin'ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosiana, izay nampiakarany ireo sarinà dinôzôro kilalao sy fiara mifono vy, fanehoana sarin'ady kely an-tsary amin'ireo kilalaony. “Tsy mahazo ‘Tiana’ amin'ny pejinao mihintsy ianao,” hoy ny filazan'ireo mpiara-mianatra aminy” hoy ny reniny. “Tsy alehany ialahy,” hoy izy ireo. Te-hanavotra ny lazan-janany any am-pianarana, niangavy ny olona ny renin'i Stepan mba hitsidika ny pejy Vkontakte-ny ary mba hametraka ‘Tiana’ amin'ireo hafany.
Olona maherin'ny 4.000 no nanao ‘Tiana’ ny lahatsorat'i Svetlana tao amin'ny Facebook, ary 670 mpampiasa aterineto no nizara azy io tamin'ireo namany. Nahazo mpamandrika maherin'ny 13.000 tamin'ny Vkontakte ankehitriny i Stepan Saveliev, zanany lahy, ary olona an'arivony no nanao ‘Tiana’ tamin'ireo hafany vao haingana . Fantsona dimy mpampita vaovao ao amin'ny Fahitalavitra Rosiana ihany koa ra ha kely indrindra no nanasa azy, ary ireo Rosiana maro manana ny maha-izy azy sy ireo olona fanta-daza dia nanoratra ho fanohanana azy. Nanatevin-daharana ny hetsika mihintsy koa aza ireo fikambanana sasantsasany. Nandefasan'ny gazety iray iCover.ru, kilalao manokana Lego, i Stepan. Dmitry Grishin, ilay mpiara-mamorona, filoha sy tale jeneralin'ny Vondrona Mail.ru koa nandefa taminy ny sarivongan'ireo mitovy amin'ilay robot BB-8 ao anatin'ny Star Wars . Ny Foiben-toeran'ny Vondrona Mail.ru ihany koa nanome azy famandrihana maimaimpoana amin'ny Armata, karazana kilalao afaka iarahan'ny maro milalao fiara mivono vy amin'ny solosaina.
Maxim Ksenzov, ilay filoha lefitra taloha tao amin'i Roskomnadzor, no iray tamin'ireo olona vitsivitsy nanao fanehoankevitra ratsy mikasika ny pejy Vkontakte-n'i Stepan . Na dia tsy niaraka tamin'ny governemanta federaly intsony aza izy, nahatsiaro ho voatery hanoro hevitra an'i Stepan i Ksenzov mba hanova ny sary famantarany. (Mampiasa sary iray somary tsy mifanentana aminy, mitsinkasina eo ambony seza, ilay zazalahikely 11 taona). Tao anatin'ny minitra vitsivitsy, efa nanana ny fanohanany sahady, ireo andianà namana vaovaon'i Stepan, tamin'ny fanehoana tamin'i Ksenzov fa tsy mahavita mandresy lahatra ihany koa ny Avatar-ny ao amin'ny Vkontakte.
Tsy hita ho mankaiza ireo torohevitra tsy niriana avy amin'i Ksenzov.
Araka ny voalazan'ny renin'i Stepan, izay milaza fa tena diboky ny hafaliana izy noho ireo valinteny matanjaka nentin'ireo olona namaly ny antsony, niverina nihavana tamin'ny zanany lahy mihitsy aza ireo ankizilahy tany an-tsekoly izay nanesoeso ny pejiny Vkontaktesy sy ny fahalinany amin'ireo dinôzôro.
Liana manokana tamin'i Stepan ny tambajotram-baovao Life.ru (Lifenews teo aloha). Ny 10 May lasa teo, namoaka tantara iray fanasongadinana tamin'ny fapilaharana ny “dinôzôro folo tsara indrindra, arak'i Stepan Saveliev” ilay tranonkala. (Ny Spinosaurus no tena tiany indrindra amin'ireo rehetra). Nanadihady mivantana an'i Stepan ihany koa ny tambajotran'ilay masoivohom-baovao amin'ny fahitalavitra, naka sary mahafatifaty, somary sahirankirana, tao amin'ny efitrano fandriany, toy ny hoe mitambotsitra eo amin'ny biraony.
Tamin'ny herinandro lasa, nanapa-kevitra ny hankalaza an'i Stepan ihany koa i Roskomnadzor, ary nataony tamin'ny fombany manokana tsy manampaharoa izany, nampidiriny tamin'ny lisitra fandraketana ofisialy ireo bilaogera tantanin'ny governemanta federaly ilay zazalahikely, mametraka azy ho laharana faha-2.487 amin'ireo adiresinà tranonkala voasoratra ofisialy any amin'ireo tompon'andraikim-panjakana Rosiana. “Miarahaba anao izahay!” hoy Rozkomnadzor tamin'i Stepan tao amin'ny Vkontakte. “Ankehitriny, afaka manatrika ireo fivoriana ao amin'ny Duma-m-panjakana ianao.”
Raha fahiny ivon'ilay fanaovan-dalàna niteraka resabe sy natahorana, ankehitriny tena adino tanteraka ilay ‘rejisitry ny bialogera ao Rosia’ izay rafitra iray fanarahana maso ny bilaogy sy tranonkala tsimponina amin'ny alàlan'ny antsapaka ataon'i Roskomnadzor. Ny “lalàna 2014 mikasika ireo mpanoratra bilaogy” dia noheverina hitsimponana, indrindra fa ireo tranonkala mpanohitra, sy hametrahana ny tompony sy ireo mpanoratra hipetraka hanaraka ireo fepetra vaovao (manohitra ny fitenenan-dratsy, ny fanalàna baràka, sy ny sisa) ka mampitombo ny harefon'izy ireo ho azo ejehana. Sahala amin'ny maro amin'ireo lalànan'ny aterineto feno famoretana ao Rosia, anefa, zara raha nampihatra izany ireo olom-panjakana, ary maro tamin'ireo mpanoratra bilaogy nampidirina tao anatin'ilay fandraketana no tsy nahalala akory ny sata manokana misy azy. (Amin'izao fotoana izao, tsy mampandoa onitra na nanasazy bilaogera na iray aza avy ao anatin'ilay rejisitra ny governemanta.